Zvakajairika Zvikonzero zveOptlook PST Faira Uori
musha Products DataNumen Outlook Repair Zvakajairika Zvikonzero zveOptlook PST Faira Uori
Zvakajairika Zvikonzero Gadzira Microsoft Outlook PST Faira Yakaora kana Yakakuvara
Kune zvikonzero zvakawanda kwazvo zvinozorega yako Outlook PST faira yakaora kana kukuvara. Isu tinovaisa mumapoka maviri, kureva, zvikonzero zvehardware uye zvikonzero zve software.
Chero nguva yako Hardware painotadza mukuchengetedza kana kuendesa iyo data yeako Outlook PST mafaera, iyo PST mafaera angango shatiswa. Kune anonyanya marudzi matatu:
Data Kuchengeta Midziyo Kukundikana. Semuenzaniso, kana rako rakaoma dhisiki riine mamwe mativi akashata uye yako Outlook PST faira inochengetwa pane izvi zvikamu. Ipapo pamwe unogona chete kuverenga chikamu chePST faira. Kana iyo data yaunoverenga haina kunaka uye izere nezvikanganiso.
Yakashata Networking Chishandiso. Semuenzaniso, iyo Outlook PST faira inogara pane network sevha, uye iwe unoedza kuiwana kubva kune mutengi komputa, kuburikidza netiweki zvinongedzo. Kana network network kadhi, cables, ma routers, hubs uye chero mamwe madhivhaini anoita maratidziro enetwork ane matambudziko, ipapo kure kuwana kweiyo PST faira kunogona kuiodza.
Simba Kukundikana. Kana kukundikana kwesimba kuchiitika kana iwe uchiwana iyo PST mafaera, izvo zvingasiya mafaira ako ePST akakuvara.
Kune hunyanzvi hwakawanda hwekudzivirira kana kudzikisira iyo Outlook PST faira uori nekuda kwematambudziko ehurdware, semuenzaniso, UPS inogona kudzikisira magetsi kukundikana matambudziko, uye kushandisa zvakavimbika zvigadzirwa zvemidziyo zvinogona zvakare kudzikisira mikana yehuori hwe data.
Zvakare akawanda Outlook PST faira kuora kunoitika nekuda kwesoftware zvine chekuita nenyaya.
Iyo isiriyo File System Kudzoreredza. Iwe unogona kuona zvisingatendeseke kuti iyo faira sisitimu yekudzosa inogona kukonzera PST faira kuora. Asi zvirizvo, dzimwe nguva kana yako faira system yaputswa, uye iwe uchiedza kuhaya dhata yekudzosa chishandiso kana nyanzvi kudzoreredza mafaera ePST pairi, mafaera akadzorerwa anogona kunge achine huori, nekuti:
Nekuda kweiyo faira system njodzi, zvimwe zvikamu zvepakutanga PST faira iri lost zvachose, kana kunyorwa nedata remarara, izvo zvinoita kuti iyo yekupedzisira yakanunurwa faira rePST isina kukwana kana iine data risiri iro.
Chishandiso chekudzoreredza kana nyanzvi haina hunyanzvi hwakakwana zvekuti / iye anogona kuunganidza mamwe marara data oachengeta sefaira pamwe nePST yekuwedzera. Sezvo izvi zvinonzi .PST mafaera asina chero dhata inoshanda yemafaira eAptlook, haabatsiri zvachose.
Iyo yekudzoresa chishandiso kana nyanzvi yakaunganidza chaiyo data mabhuroko eiyo PST faira, asi haina kuasanganisa iwo nenzira chaiyo, izvo zvakare zvinoita kuti yekupedzisira yakanunurwa PST faira isashande.
Naizvozvo, kana pakaitika njodzi sisitimu yefaira, iwe unofanirwa kutsvaga yakanaka yekudzoreredza chishandiso / nyanzvi kudzoreredza yako PST mafaera. Chishandiso chakashata / nyanzvi ichaita kuti mamiriro acho anyanye pane kuti ave nani.
Virus kana Imwe Yakashata Software. Mazhinji mavhairasi anokanganisa nekukuvadza iyo Outlook PST mafaera kana kuita kuti asasvikike. Inokurudzirwa kwazvo kuisa mhando anti-virus software kune yako Outlook email system.
Bvisa Outlook Zvisina kujairika. Mune zvakajairwa mamiriro, iwe unofanirwa kusiya Outlook zvine mutsindo nekuchengetedza ese ako shanduko kuPST faira uyezve nekudzvanya "Buda" kana "Vhara" menyu chinhu. Zvisinei, kana Outlook yakavharwa zvisina kujairika paunenge uchivhura uye uchiwana iyo PST faira, ipapo iyo PST faira inokanganisa kukanganiswa kana kukuvara. Izvi zvinogona kuitika kana kukundikana kwesimba kwataurwa pamusoro kwaitika, kana kana Outlook iri kubatikana mukuita chimwe chinhu uye iwe ukachigumisa nekudzvanya "End Task" muWindows Task Manager, kana kana iwe ukadzima komputa usina kusiya Outlook neWindows zvakajairika.
Kushaikwa muzvirongwa zveAptlook. Chirongwa chega chega chine kusakwana, saizvozvowo Outlook. Kumwe kushomeka kunouya kubva kune pfupi maficha evakagadziri Vanogona kazhinji kutarisirwa asi haigone kugadziriswa nekungogadziriswa kana zvigamba. Semuenzaniso, mumazuva ekutanga, vagadziri veMicrosoft havatende kuti kuchave nedhata yakawanda mumafaira ePST, saka saizi yakakura yePST faira yeAptlook 97 kusvika 2002 ndeye 2GB nekugadzirwa. Asi mazuva ano, kutaurirana uye ruzivo rwemunhu anokura nekukurumidza zvekuti iyo PST faira inowedzera zvakanyanya. Kana iyo PST faira ikaswedera kana kupfuura 2GB, inozoshatiswa. Nepo kumwe kushomeka kuchikonzerwa nekushaya hanya kwevagadziri. Kazhinji, hazvigone kutarisirwa asi kana zvangowanikwa, zvinogona kugadziriswa nezvidiki zvigadziriso kana zvigamba. Semuenzaniso, kana Outlook ikasangana nekanganiso isingatarisirwe, ichati "Microsoft Outlook yasangana nedambudziko uye inoda kuvhara. Tine urombo nekusagadzikana.”Uye kumisa zvisina kujairika, izvo zvingangoita kuti PST faira iwedzere.
Zviratidzo zvehuori PST Mafaira:
Nezve kwako chirevo, isu takaunganidza runyorwa rwezvakajairika zvikanganiso uye matambudziko kana uchishandisa Outlook , iyo inosanganisira zviratidzo kana iyo PST faira ikaora.
Gadzirisa Yakashata PST Mafaira:
Iwe unogona kushandisa yedu yekuhwina-kuhwina chigadzirwa DataNumen Outlook Repair to dzosera ako akaora Outlook PST mafaera.